भ्रमको सिकार भएका देशका युवाहरु ! « Postpati – News For All
अहिलेसम्म हामीले के सिक्यौं ? डण्डा बोक्न सिक्यौं । लाठ्ठि बोक्न सिक्यौं । टायर बाल्न सिक्यौं । बन्दुक बोक्न सिक्यौं । ब्यबस्था फाल्न सिक्यौं । ध्वस्त पार्न सिक्यौं । तर, निर्माण गर्न कहिलै सिकेनौं ।
ब्यबस्था ल्याएर मात्रै नहुनेरहेछ । त्यस ब्यबस्थालाई समृद्धि कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिकेनौं ।
समीक्षा गरौं ! देशको उर्बर शक्ति युवाहरु अझै पनि ती पात्रहरुको पक्षबिपक्षमा जुधिरहेका छौ । केका लागि ? कसको लागि ? के एकपटक आफ्नो लागि सोच्नु भएको छ ? आफ्नो परिवार र भाबी पुस्ताको लागि सोच्नुभएको छ ? तपाइँहरु जो देशबाहिर हुनुहुन्छ, बिश्व श्रमबजारमा सबैभन्दा सस्तो मुल्यमा अरबको बालुवामा इमारतहरु ठड्याउदै हुनुहुन्छ, यो परिस्थिति ल्याउनुमा कसको जिम्मेवारी छ ? कहिले सोच्नुभएको छ ? आज तपाइँहरु नै बढी साइवर युद्धमा होमिनुभएको छ ।
आज देशका ठुल्ठुला शहरहरुमा जुलुस निकाल्दै हुनुहुन्छ । कसको लागि ? हामीहरु बेरोजगार भएकैले शहरका चोकचोक र गल्लिगल्लिहरुमा धुलो उदाउँदै छौँ । यो बेरोजगार कसले निर्माण ग-यो ? कहिले सोच्नुभएको छ ?
हामी राष्ट्रिय स्वाधीनताको बिषयमा बडो भाबुक हुन्छौँ । देशका नदिनालाहरु कसले बेच्यो भनेर किन खोज्दैनौं ? सिमाना कसले मिच्न निमन्त्रणा ग-यो भनेर हिसावकिताव खोज्दैनौं ।
देशमा एउटा सानो संकट आइलागेको हुन्न, कुदेर बिदेशको पाउँ पर्न जाने को ? अलिकती बिरामी भयो, उपचारको बाहनामा उनै बिदेशीहरुको खुट्टा मोल्न जाने को ? के नेपालमा एउटा पनि गतिलो अस्पतालहरु छैन ? छैन भने किन नबनाउने ? बनाउने दायित्व कसको ? कि स्तरीय अस्पताल नभएका ? स्तरिय बनाउने दायित्व कसको ?
हामी छिमेकीलाई गाली नगरौं युवा मित्रहरु । समस्या हामी भित्रै छ । गलत त हाम्रा अगुवाईहरुमा छ । अझै पनि यिनैको गुणगान गाइरहने ?
के हो जिन्दावाद भनेको ? के हो मुर्दाबाद भनेको ? सोचबिचारै नगरी नारा लगाउने ? एकाअर्कालाई यसरी गालीगलौज गरेर हुन्छ ? जहिले पनि निषेध र बिभाजनका नाराहरु मात्रै ? खै एकताका कुरा ? एकता बिना समृद्धि सम्भब छ ? सुझ न बुझ ताली ठोक्ने ? सोच्ने क्षमता खोइ ?
बेकुफ त हामी युवाहरु पो रहेछौं । जहिले पनि प्रयोग भइरहने । कहिलेसम्म हो यो सिलसिला ? एकपटक जोखिम उठाऔं । भनिन्छ, जोखिम भित्रै अनेकौं सम्भावनाहरुको ढोका उघ्रीन्छ । युग बाहकले संसार परिवर्तन गर्न सामर्थ्य राख्नुपर्छ ।